सपनामा राजनीति | himalayakhabar.com
9th Jan 2018, Tuesday | २०७४ पुष २५, मंगलवार ०५:२५
जब जब मनमा केही कुरा खेल्न थाल्दछ तब तब ती कुराहरु सपनामा घटित हुन थाल्दछन् । एउटा सचेत नागरिक भएको नाताले देश, काल र वर्तमानमा घटित घटनाहरुबाट अछुतो रहने कुरै आएन । क्याम्पसमा साथीहरु आआफ्नो धारणा राख्दछन् उथलपुथलका बारेमा । म पनि मौन बस्ने कुरै आएन । आफू सोझै राजनीतिमा नहोमिए पनि २० वर्षदेखि अप्रत्यक्ष राजनीति गरिरहेको छु । म राजनीतिबाट टाढा छु भन्नु, स्वयम्लाई छल्नु हो । म पनि राजनीतिमा चासो राख्दछु । आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छु ।
धेरै वर्षअघि चितवन जिल्लाका समाजसेवी एवम् प्रखरवक्ता शेषनाथ अधिकारीज्यूलाई मैले आफ्नो अनुमानशास्त्र प्रयोग गरेर भनेको थिएँ, ‘शेषनाथजी, म पढाएर गुजारा टार्ने मानिस हुँ । जे विषय पनि पढाएँ । अचेल लेख्छु पनि । राणाशासन अन्त्य हुनका कारणहरु पढाइयो, पञ्चायत पतन हुनका कारणहरु पनि मच्ची मच्ची पढाइयो । राजतन्त्रका बारेमा बोल्छन् । चारतारेहरुका नजिक छु, यथेष्ट माया नपाए पनि । बाबुराम पुरीजीले उच्च रक्तचापका कारणले म दाजु त्रिलोचन पौडेल वा सहकर्मी रामप्रसाद सिलवाल बन्न सकिरहेको छैन । भविष्यमा के हुन्छ ? भन्न सक्दिन । एउटा कुरा शेषनाथजी, मैले पास हुन्न भनेर ठोकुवा गरेको विद्यार्थी फेल भएको छ । मेरो अनुमान, अक्सर खेर जान्न ।
कतै कांग्रेस पतन हुनका कारणहरु पनि पढाउन पर्ने त होइन ? शेषनाथजीलाई मैले यो प्रश्न गरेको धेरै वर्षअघि हो । आज आएर सत्य सावित हुन खोजेको त होइन । यही कुराहरु मनमा खेलिरहेका थिए सपनामा रामचन्द्र पौैडेल, शेषनाथज्यू र अन्य नेताहरु आउनुभयो । एकछिन उहाँहरुको कुरा सुनेँ । ढाकछोप मात्रै । गल्ती स्वीकार्न कोही पनि तयार नहुने । मलाई न आश, न त्रास । इमान्दारीपूर्वक कमजोरी देखाउने मानिस शत्रु होइन । रामचन्द्र दाजीलाई सम्बोधन गर्दै बोलेछु, ‘दाजी, शेषनाथ अधिकारी मेरो पारिवारिक अभिभावक हुनुहुन्छ ।
चुनाव हारे पनि जिते पनि चितवन जिल्लामा उहाँको उचाइको अर्को मान्छे छैन । उहाँकै संगतले कुनै जमानामा सक्कली छत्तीसे भइयो । गर्व थियो कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता सन्त बाबाको अनुयायी हुन पाएकोमा । गणेशमानदेखि सन्त बुढासम्मलाई रुवाएको कांग्रेसले मलाई पनि छोडेन । यति मात्र हो र बाबुराम पुरीलाई धुरुक्क रुने बनायो । दाजी त्रिलोचन पौडेलको पीडा कसले बुझ्ने ? रामचन्द्र दाजी, लेखेर राख्नुहोस् कांग्रेसलाई हराएको अरुले होइन । र, अब यो खेलको अन्त्य होलाजस्तो पनि छैन । २३ र ४० पनि कताबाट चिठ्ठा प¥यो भन्छु म । यो हालतमा दललाई पु¥याउने आधार २४ वर्षअघि नै बनेको थियो । विचरा हुन् शेरबहादुर अंग्रेजीमा एमए गरेर आएको मान्छेलाई संस्कृत पढाउन पठाएर हुनछ ? यदि कांग्रेसलाई प्रजापरिषद् नबनाउने हो भने यो दल एकदिन पर्यटकीय वस्तु’ बन्छ र विदेशी विद्वानहरु यसमाथि विद्यावारिधि गर्न आउनेछन् ।
२०७४ पुष २४, सोमबार १८:२२
हिमालयखवर संवाददाता- ह्युस्टन, टेक्सास । यहाँको निर्माणाधीन पशुपति मन्दिर एवम् सामुदायिक केन्द्रकोलागि आर्थिक सहयोग जुटाउने काममा सक्रियता देखिएकोछ । गत ...